Fiahiahiana hosoka eny amin’ny ladoany: nohadihadin’ny Bianco i Mbola Rajaonah | NewsMada
Fiahiahiana hosoka eny amin’ny ladoany: nohadihadin’ny Bianco i Mbola Rajaonah
Namaly ny fampiantsoan’ny eo anivon’ny Bianco ilay mpandraharaha, i Mbola Rajaonah, omaly. Mbola hitohy amin’ny manaraka ny famotorana na efa lasa any ivelany aza ity olon’ny fitondrana teo aloha ity.
Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina ny nandraisan’ny Bianco teny Ambohibao an’i Mbola Rajaonah sy ny mpisolovavany azy. Vita ny maraina iny ihany izany ary nalefan’ny tompon’andraikitra nody ny tenany, taorian’izany. Mbola hampanantsoina ihany anefa ity mpandraharaha ity raha misy ny ilana azy. Na izany aza, nitondra fanazavana ny mpisolovava ity mpandraharaha ity. “Efa nentina teny amin’ny filankevi-panjakana ny tsy fahazoany mivoaka any ivelany (IST) ka nampiatoana izany didy izany. Hatreto koa tsy mitombina ny fisian’ny didy fampisamborana. Betsaka ny tsaho sy ny resaka momba izany, saingy tsy hitako ny antony hisamborana azy”, hoy izy, taorian’ny fanadihadiana nataon’ny teo anivon’ny Bianco azy ireo. Efa tafapetraka, ny zoma teo, ary nivaly ny androtr’io ihany izany fampiatoana ny IST nangatahan’ny mpisolovava izany ka ahafahany mivezivezy na mivoaka hatrany ivelany.
Andramena sy hosoka…
Anisan’ny antony nampiharana aminy ny didy tsy fahazoana mivoaka any ivelany (IST) ny fiahiahiana ity mpandraharaha ity ho nanao hosoka teny anivon’ny fadin-tseranana. Voatonontonina amin’ny fanondranana an-tsokosoko andramena koa ny tenany.
Tsiahivina fa niainga avy any amin’ny minisiteran’ny Atitany ny taratasy milaza ny fahazoan’ity mpandraharaha ity, izany IST izany, araka ny datin’ny 13 novambra 2018. Nomena toromarika avokoa ny rantsa-mangaikan’ny minisitera misahana ny eny anivon’ny lafintany sy ny eo anivon’ny fiadidiana ny polisim-pirenena hampihatra izany ka tsy hamela malalaka an’i Mbola Rajaonah hivoaka any ivelany aloha mandra-pisian’ny toromarika vaovao.
Araka izany, efa nivaha io IST io ary mbola hampanantsoin’ny Bianco raha toa ka mbola misy ny fanadihadiana tokony hatao an’i Mbola Rajaonah.